Mogadishu Journal » Messi wuxuu kula guuleysan doonaa PSG Champions League wuxuuna ku fariisan doonaa Barcelona – Riquelme
Lionel Messi ayaa kula guulaysan doona Champions League kooxda Paris Saint-Germain ka hor inta uusan ka fariisan Barcelona, ​​sida uu sheegay saaxiibkiisii ​​hore Juan Roman Riquelme.
Messi ayaa ku biiray kooxda ka dhisan Ligue 1 heshiis labo sano ah bishii la soo dhaafay ka dib markii la soo gabagabeeyay qandaraaskii uu kula jiray Barca, isagoo kulankiisii ​​ugu horeeyay u ahaa bedel kulankii ay 2-0 kaga badiyeen Reims.
In kasta oo PSG ay ku gacan sarreysay kubbadda cagta Faransiiska tobankii sano ee la soo dhaafay - waxay ku guuleysatay toddobo horyaal oo Ligue 1 ah, iyo sidoo kale Coupe de France iyo Coupe de la Ligue lix jeer midkiiba waqtigaas - taajkii Champions League ayaa sii waday inuu ka fogaado.
Riquelme, oo ka garab ciyaaray Messi koox iyo dalba, ayaa rumeysan in saaxiibkiisii ​​hore uu siin doono gabalkii ka maqnaa ee PSG ee ku aaddan hanashada qaaradda.
Laakiin isla waqtigaas, xiddigii hore ee qadka dhexe uma malaynayo in sheekada Messi ee Barcelona ay weli dhammaatay.
“Messi ayaa ugu fiican maxaa yeelay wuxuu jecel yahay inuu kubad ciyaaro,” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Boca Juniors, oo kula guuleystay Messi dahabka Olombikada 2008 Messi.
“Haddii PSG aysan kula guuleysan Champions League hadda Messi, mar dambe kuma guuleysan doonaan.
“Waan hubaa in Messi uu Paris kula guuleysan doono Champions League isla markaana uu ka fariisan doono Barcelona”.